Akpa Vario nke Tucano, akpa a na-elekọta Mac na azụ gị | Esi m mac
Akpa Vario nke Tucano, akpa azụ nke na-elekọta Mac na azụ gị
Jordi Gimenez | | MacBook Pro, ọtụtụ
Anyị na-eche ihu akpaazụ ọhụrụ nke anyị ga-eji Mac na ngwa ya, na mgbakwunye na ngwaọrụ anyị ndị ọzọ, bụ ezigbo okomoko. Site na Tucano Vario Bacpack ọhụrụ, onye ọrụ nwere ike iji nkasi obi buru ihe niile ha chọrọ na azụ ya na nkasi obi. ekele na ergonomic design o nwere.
N'aka nke ọzọ, ekwesịrị ịdeba ama na mgbe anyị na-ebu Mac ma ọ bụ laptọọpụ na akpa anyị, ihe dị anyị mkpa na mgbakwunye na nhazi ya bụ nchekwa nke ihe anyị na-ebu n'ime na akpa Tucano ọhụrụ a nwere ya. Anyị ekwesịghị ịtụ egwu maka Mac dị ka a ga-echebe nke a nke ọma n'ime tinyere akụrụngwa ndị ọzọ anyị na-ebu n’ime.
Maka ugbu a, anyị nwere ike ikwu na akpaazụ azụ Tucano ọhụrụ a nwere ike iburu a MacBook Pro Retina 15 "ma ọ bụ Akwụkwọ ịde ihe ọ bụla ruru 15,6", yabụ na anyị nwere ọtụtụ ohere maka Macs ndị ọzọ.
O doro anya na akpaazụ Tucano Vario ọhụrụ ahụ na-etinye akụkụ padded na azụ iji kwado ojiji, ụdị ngwa ngwa niile ka ọ ghara ịgagharị mgbe anyị debere ya na azụ, jiri aka na-agba ume ma na-agbanwe agbanwe nke na-enye anyị karịa nkasi obi a na-anabata. N'ime ya, ọ na-agbakwụnye ọtụtụ ngalaba iji chekwaa martphone anyị, Mbadamba ụrọ na ọbụna batrị mapụtara. N'akụkụ, anyị nwere akpa abụọ ọzọ nke na-enye gị ohere ịchekwa karama ma ọ bụ ihe ndị yiri ya. Ihe bụ ihe ọzọ, nwere akpa nchekwa na azụ azụ, zuru oke maka idebe obere akpa gị ma ọ bụ igodo.
Na nkenke, ọ bụ akpa na-adọrọ mmasị iji buru Mac anyị site n'otu ebe ruo ebe ọzọ, yana nchekwa nke echedoro ma lekọta azụ anyị. Pricegwọ nke ọhụrụ a Akpa Vario nke Tucano bụ 46,90 euro, n’enweghị mgbaghasịlu akụrụngwa yana etu Vario a siri dị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Mac kọmputa » MacBook Pro » Akpa Vario nke Tucano, akpa azụ nke na-elekọta Mac na azụ gị
Ebee ka m nwere ike ịzụta azụkọ a
Kedu ka m ga-esi nweta otu?
Zaghachi Edu Flores
Tucano na-enwekarị akpa azụ na nnukwu ụlọ ahịa, mana site na weebụsaịtị ya ị nwekwara ike ịzụta ya ma ziga ya n'ụlọ gị.
Biko ziga katalọgụ na ọnụahịa, yana usoro ịkwụ ụgwọ
Zaghachi filiberto Aguila
Otu esi agbazite ihe nkiri na iTunes
MacBook gị chọkwara ka gị na onye nchekwa a bụrụ ụbọchị